Ungada here kuedza Linux? Tungamira yevanoda kuziva uye vatsva. | Kubva kuLinux
Ungada here kuedza Linux? Tungamira yevanoda kuziva uye vatsva.
naPerseus | | Yakurudzirwa, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Chinangwa chikuru cheichi gwaro ndechekuita kuti hupenyu huve nyore kune vatsva kana kuda kuziva vanoda kuziva kuti Linux iri nezvei, iyo yandinotarisira kuti inogona kubatsira vamwe vedu "Shanduko nzira" kubva kune imwe inoshanda sisitimu kuenda kune imwe, kuyedza kusanyanyisa kushandisa iyo jargon kuti isu tinowanzo bata vashandisi veiyo penguin uye kuitira kuti tidzivise kuti chiitiko ndicho chidiki "Zvinoshungurudza" zvinogoneka;).
Ngatitangei: D ...
1 Chii chinonzi Linux?
2 Chii chatinogona kutarisira kubva kuLinux?
2.1 Ok murume, iwe wakandikurudzira, ndinoda kuedza Linux. Ndinozviita sei?
2.2 Sarudza yako distro:
3 Dhawunirodha zvinongedzo
4 Gadzira pendrive, USB memory, "bootable" USB kiyi
Chii chinonzi Linux?
Zvakare kutaura, Linux ndiyo inoshanda sisitimu yakagadzirwa pasi pechinangwa chemahara software, izvi zvinoreva kuti: kodhi yayo yese yekodhi inogona kushandiswa zvakasununguka, kugadziriswa uye kugoverwa patsva. Kuva yemahara software, hauzosungirwa kubhadhara rezenisi rekuishandisa. (Uchakwanisa kubvisa chigamba chako cheziso uye gumbo rako rembambo, kubvira kana uchishandisa Linux, havazombokuudza zvakare "pirate" XD. Uye iwe unenge uine anoshanda system 100% kune yako kufarira kana kuda.)
Chii chatinogona kutarisira kubva kuLinux?
MuLinux tichawana zvinotevera zvinhu:
Masisitimu akavakirwa kana akatorwa kubva kuUnix, senge Linux, ane "level yekuchengetedza" zvirinani kupfuura zvavaigona kuvimba nazvo muWindows kana mamwe masisitimu anoshanda (kubva pano pane SO;)). Izvi zvinonyanya kukonzerwa nenyaya yekuti chero munhu anozvida anogona kuziva mashandiro eLinux mukati mayo uye kuti inoitisa basa rei kuita "X" mabasa (kunyanya izvi zvine chekuita ne programmers, idzo kune vakawanda vari kubatana kwete chete mu mapurojekiti akadai seLinux, asi zvakare achibatsira kuwedzera mashandiro aripo, semuenzaniso mitambo, hofisi suites, odhiyo / vhidhiyo vatambi, nezvimwewo). Nenzira iyi, zvese zvinoitika mukati mekomputa yako zvinoitwa mu "pachena", sezvo isina kuviga chero chinhu kubva kumushandisi, nekudaro uchidzivirira zviitiko zvinokanganisa kuvanzika uye / kana kuchengetedzeka kweruzivo rwako, senge: kuunganidzwa kusingazivikanwe kwemaitiro ako ekubhurawuza (iwo mapeji ewebhu aunoshanyira kazhinji), ruzivo yawakachengeta, data rako pachako, kupinda kwePC yako uri kure, kuisirwa maleware (mavhairusi, maTrojans, makonye, ​​nezvimwewo), kubirwa chitupa uye nehumwe hunyengeri hwakawanda: (Sezvo paine vanhu vazhinji vanoita basa rekuvandudza Linux, zvingave zviri nyore kune chero mugadziri kuti akwanise kuwana aya marudzi ezvakaipa, kurondedzera kana kubvisa aya mabasa akashata kana maburi ekuchengetedza, nokudaro zvichipa kuti Linux ive yakachengeteka kune isu vashandisi: D.
Izvi hazvireve kuti hapana hutachiona, Trojans kana rootkits yeLinux, kunyange zviripo, zviri kushomeka uye nekuda kwenzira iyo Linux yakagadzirirwa, zviito zvakashata zvavanogona kuita zvinenge zvisina. Kazhinji, hazvikurudzirwi kuisa antivirus paLinux, kunyangwe paine zvimwe zvakanaka kwazvo, nekuti kazhinji hazvidiwe muzviitiko zvakawanda. Saka isu tinogona kuzvinunura pachedu dambudziko iri zvese kune mushandisi uye mukutungamira kwezviwanikwa padanho rehardware (chengetedza RAM semuenzaniso;)).
Catalog yakakura yemahara, yakabhadharwa kunyorera uye ayo anokumbira mupiro:
Pano, isu tinogona kukanganwa iyo yakawandisa mutengo wemalayisensi ezvirongwa kana mashandisiro, emakiyi magenge, kutsemuka, serials, nezvimwe. Munguva yandave ndichishandisa Linux, ini handina kumbomanikidzwa kubhadhara kushandisa chero chazvo, hongu, zvinogara zviripo kana zvingave zvakanaka kupa chimwe chinhu, kwete hazvo mari, nekuti inogona zvakare kubatsirwa nedzimwe nzira, sekushambadzira / kurudzira chirongwa ichi, batsira neshanduro yaro mune mimwe mitauro, nezvimwe. (Unogona kutaura kuti zvese zvandinoshandisa kana zvandakashandisa zvave zvemahara: P)
MuLinux tinowana kusiyana kukuru maererano nemaapplication, nharaunda yedesktop, mamaneja ewindo, mafomati esoftware, nezvimwe. Tine zvakawanda zvekusarudza kubva, zvinoenderana nezvatinofarira kana zvatinoda. Ngatitarisei mimwe mienzaniso.
Mamiriro edesktop uye mamaneja eWindow:
Nenzira yakapusa uye kwete kuyedza kuvakanganisa, ini ndinokuudza kuti mukurohwa kukuru ivo vari mukutungamira kwekuratidzira windows, dialog mabhokisi, madingindira uye maressa pane desktop yako. Anonyanya kujairika ndeaya:
<° Vhura bhokisi
Cherechedza: Kune zvimwe zvakawanda, asi isu tichazongotaura nezve izvo zvinonyanya kushandiswa, kana iwe uchida kuwedzera chiono chako pamusoro pazvo, Wikipedia ishamwari yake;).
Saka kuti undinzwisise zvirinani, yega yega inoratidza tafura yebasa munzira inokwezva kana yakanyanya, dzimwe dzadzo dzine zvadzo zvinoshandiswa sema compressors / decompressors, mameseji anotumira mameseji, vatengi vetsamba, mamaneja emafaira, nezvimwe. Izvi zvese zvinoenderana nemamiriro ezvinhu avakasarudza.
Software mapakeji mafomati:
Kana ndotaura newe nezve software mapakeji mafomati, ini ndinoshandisa fananidzo: Windows program installers (".Exe" kana ".msi"). Sezvo vazhinji venyu vamunoziva, mafaera aya anotibvumidza isu kuisa mapurogiramu kana zvirongwa munzvimbo iyoyo. MuLinux mune zvekare mafaera aya, akajairika ndeaya ".Deb" y ".Rpm".
Mapakeji .deb anoshandiswa neakawanikwa kana akavakirwa mukugovera Debianvangava sei Debian, Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Bodhi Linux, Linux mint, nezvimwe. Iyi fomati ndiyo inonyanya kufarirwa pane zvese, nekuti kazhinji iwe unogara uchiwana iyo .deb package yeapp kana chirongwa chaunoda. Iwo mapakeji .rpm anoshandiswa neakawanikwa kana akavakirwa mukugovera Red Hat, sezvo vangave Mandriva, Fedora, PCLinuxOS, CentOS, nezvimwe. Ivo havasi ivo chete mapakeji mapakeji mafomati aripo, isu tinogona zvakare kutaura nezve iyo .pkg.tar.xz (dzakapetwa mabhinari) pakati pevamwe, asi idzo dzakanyanya kuitika;).
Ini handiende mune tsananguro kana ndichisarudza kuti ndeipi fomati iri nani pane imwe, asi zvakakosha kuti uzive kuti zvichienderana nekugovana kwaunosarudza kunoenderana nemafomati eiyo software package yauchashandisa.
Zvishandiso kana Zvirongwa
MuLinux mune zvakawanda zvinoshandiswa zvekusarudza kubva. Zvikumbiro senge:
<° Mafaira mamaneja
<° Tsamba vatengi
<° Vatengi vekutumira mameseji
<° Gwaro vanoona
<° Suites hofisi
<° Webhu mabhurawuza
<° Audio-vhidhiyo vatambi
<° Vataridzi vezvifananidzo
<° Uye zvimwe zvakawanda…
Iwe unogona kuzviwana iwe mune iyo kesi yekuti iwe unogona kuve nemakumi maviri sarudzo dzakasiyana idzo sezviri pachena dzinoita basa rakafanana, asi ingori chete fungidziro, sezvo yega yega "Gadzirisa zvatinoda" zvakasiyana, ndinorevei? Zvakanaka, munhu wese anozvisarudza zvinoenderana nezvavanofarira kana zvavanofarira.
Kune matani emablog, maforamu, emanyorero, wikis, tutorials neruzivo izvo zvinogona kugara zvichitiburitsa mudambudziko rehunyanzvi. Kana zvese izvi zvikasashanda, vimba neni ipapo pachagara paine mushandisi weLinux anoda "Chiedza iwe" zvishoma munzira yako. Uye kana zvisiri, kune uyo anoziva zvese (Mutsvene Google), sezvo uine chokwadi chekuti kana ukabatika nemhinduro kana dambudziko, zvirokwazvo zvichave zvakaitikawo kwazviri uye mumwe munhu anenge azvigadzirisa.
<° Kune izvo zvisingaomere zvakanyanya:
Kune mitambo yakawanda yaunogona kunakidzwa nayo yako yekuwedzera nguva kana kukanganisa.
Takasvika pane imwe nyaya zvishoma "Kwapera" kwedu tese tinoshandisa Linux. Kutaura chokwadi, usatarisira kuve nemazita makuru emitambo paLinux. Ichi chidzidzo chakapamhama uye chakakonzera makakatanwa makuru kutenderedza Linux. Naizvozvo ini handisi kuzobata iri gwaro sezvo richipa zvakawanda zvekutaura nezvazvo. Neizvi ini handireve kuti haugone kutamba "hapana". Iko kunogara kune nzira uye / kana nzira dzekuzadzisa izvi, asi nokutendeseka usatarisira kuwana zvakafanana chiitiko muWindows: S.
Native Windows application inomhanya paLinux:
Zvakananga hazvigoneke kumisikidza maWindows ekushandisa muLinux (izvi imhaka yekuti iwo maviri akasiyana masystem anoshanda), ndinoti kwete zvakananga, sezvo zviripo nekuda kwechinangwa ichi, chishandiso chinonzi waini iyo inobvumidza kuita izvi. Kunyangwe zvakadaro, kana Waini iine basa rakawandisa rekuita (kusakwanisa kumhanyisa imwe chirongwa nemazvo), tinogona kuzvigadzirisa zviri nyore Virtualizing Windows mumuchina chaiwo (icho chinhu chakafanana nekuve neWindows inomhanya mukati meLinux, nhau dzakanaka !!!: D). Nhasi kune akawanda maficha ari multiplatform. Izvi zvinoreva kuti vanokwanisa kumhanya pane ese Windows neLinux pasina kunetseka, ingo kurodha pasi uye nekuisa vhezheni yeiyo OS yakasarudzwa.
Ok murume, iwe wakandikurudzira, ndinoda kuedza Linux. Ndinozviita sei?
Kuti tizive kugovera kwatinofanira kusarudza, isu tinofanirwa kufunga nezve zvinotevera zvinhu:
Komputa yako Hardware:
Ichi chinhu chakakosha kwazvo kana uchifunga nezve distro (ipfupi yekugovera;)). Kana tine muchina "latest modhi" Tinogona kuisa chero chinhu, asi kana zvisiri, isu tichafanirwa kuve tinosarudzika neiyo distro. Linux inounza madhiraivha mazhinji emafaira ako eWiFi, mavhidhiyo uye makadhi ekuteerera, nezvimwe. Asi kwete kugovera kwese kunosanganisira ivo nekutadza, izvi zvinonyanya kukonzerwa nezvikonzero zviviri. Kune ma distros asingasanganisi navo nekuda kwematambudziko ekunyorera (nekuti iwo epamhepo kana ane copyright software) kana nekuti izvo zvishandiso zvinyowani.
Ndeapi mashandisiro atinopa isu zvishandiso?
Ndiri kureva kuti isu tinofanirwa kufunga kana isu tichiwanzo shandisa kufamba pawebhu, senzvimbo yekugadzira (mabasa, kugadzirisa mifananidzo, vhidhiyo, kusimudzira), nezvimwe. Sei? Huye, kugovera kwakawanda kunoisa zvese zvinodiwa otomatiki kana isu tapedza kuisirwa kweLinux yedu. Nekudaro, kana isu tikaisa kugovera kwakasarudzika mukuteerera-vhidhiyo yekugadzirisa, kana kumisikidzwa kwapera ndizvo chaizvo zvatichazowana, kunyorera kwechinangwa icho. Asi kana isu tichingoda kuti iwe uise webhu bhurawuza uye izwi processor? Kunenge kuri kutambisa nguva kuti tibvise zvese zvatisingade kuti zvienzane nezvatinoda, handiti?
Mamwe ma distros ari nyore kubata kupfuura mamwe. Izvi zvinodaro nekuti vamwe vanotora nguva yakareba kugadzirisa zana remazana emuchina wedu Hardware uye software pane vamwe. Kana isu tichida kutora macomputer edu kana kumisikidzwa kweLinux kwapera kana kana tiine imwe nguva yekunatsa ruzivo maererano nezvinodiwa nezvatinoda. Zvese izvi zvinoenderana nesarudzo yemushandisi.
Ruzivo / Gwaro:
Kunyangwe zviripo zvese kugoverwa kweLinux kune ruzivo rwakawanda, mune zvimwe zviitiko zvinokubhadharira zvakawanda kuti uwane ruzivo nezve X kana Y kugovera. Izvi ndizvo, nekuti iyo inonyanya kufarirwa iyo distro iri, zviri nyore kuti iwe uwane ruzivo rwakanangana nazvo, uyu hausi mutemo, asi dzimwe nguva unoita.
Kumwe kugovera kunogona kuve nekushandisa kwakawanda (uko kunogona kuiswa pasina kuyedza kukuru) kupfuura vamwe. Semuenzaniso, kugoverwa kwakavakirwa paDebian kunobatsira zvakanyanya kubva pane izvi zvichienzaniswa nezvimwe zvakagoverwa. Kudzivirira iyo yekuda kuumbiridza ini ndinofanira kusuma iyo inotyiwa uye kuvengwa "arcane mirairo" kukwanisa kuisa X application iyo isipo kune yako distro.
Desktop Nharaunda / Window Maneja:
Sezvandanga ndatsanangura kare, avo vane basa rekutiratidza dhesiki redu kana nzvimbo yebasa. Ivo vanoti rudo rwakazvarwa kubva pakuona, saka ndichakusiira mimwe mifananidzo yezvingave zvakaita madhesiki ako emangwana. Sarudza iyo yaunonyanya kufarira 😉
Cherechedza: Ini ndinosimbisa zvakare kuti havazi vese mamaneja emahwindo kana mamiriro edesktop aripo, ini ndakangoisa akajairika.
Iyo yekuparadzira yekuvandudza kutenderera:
Mazhinji ekuparadzirwa kweLinux anomhanyisa pane yakasimbiswa yekuvandudza kutenderera (kugovera kuburitsa cyclic). Izvi zvinoreva kuti izvo zvinonyanya kukosha kana kutsoropodza kugadzirisa, pamwe neatsva maficha, anoburitswa nguva nenguva neshanduro yega yega. Izvi hazvireve kuti kana distro yaiswa pakombuta yako, haizombo gadziridzwa. Ichavandudzwa, kunyangwe zvishoma nezvishoma kana kungogadziridza chimwe chinhu chakakosha zvakanyanya. Izvi ndezvekuitira kuti hupenyu huve nyore kune vanogadzira izvo zvakataurwa distro, kuti vave nenguva yakakwana yekuyedza kwavo kutsva kuita uye / kana mashandiro, nekudaro vachidzivirira kuti vashandisi vanotambura nekusagadzikana neshanduro dzekuvandudza.
Muchiitiko chekugoverwa kwakadai seUbuntu kana kutorwa pairi, yavo yekuvandudza kutenderera ingangoita yega yega mwedzi mitanhatu. Izvi zvinoreva kuti pakupera kwenguva iyoyo, vhezheni itsva inoonekwa nezvimwe kana zvakawanda zvitsva mukati mayo. Mune kumwe kugovera nguva yacho inogona kusiyana. Izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kunge uchiisa uye / kana kudzoreredza nguva zhinji, kazhinji isu vashandisi vanofarira kugara tine vhezheni yazvino yezvatinoshandisa (isu vedu vanotambura shanduro : P). Rangarira kuti iwe unogona zvakare kugara pane yazvino vhezheni yeyako kifaa kwenguva yakareba, kana uchida.
Kune zvakare kugoverwa uko isina yakasimbiswa yekusimudzira kutenderera (migove kuburitsa kuburitsa). Aya ma distros anogara achikubvumidza iwe kuti uve neazvino eazvino pakombuta yako uye unogona kutokanganwa nezvebasa rinonetesa rekumirira kusvika pane inotevera vhezheni kuti uwane iyo yazvino. Kazhinji idzi mhando dzekugoverwa hadzikurudzirwe kune vatsva sezvo ivo vachigara vachichengetwa vachigadziriswa uye zvinogona kukonzera rumwe rudzi rwechinetso chakapihwa iyi mamiriro, izvi zviri mukufunga (izvo zvinopikiswa ipapo). Ini pachangu, handisati ndambove nezvinetso nerudzi urwu rwema distros, kunyangwe hazvo zvirizvo, zvinoda kuziva zvishoma nezve iyo "se" and the "sei" gadza kana kugadzirisa X kana Y application. Kana iwe uri mumwe wevanhu vane nguva uye shuwa kutsvagisa zvishoma muwebhu kuti uwane mhinduro kune kumwe kudzoka, usazeze kushandisa iyi mhando yekugovera.
Sarudza yako distro:
Pasina imwezve ado, ngatione kuti ndezvipi zvinogoverwa zvinogona kubatsira timu yako uye zvakakwanira zvaunoda.
<° Kugoverwa: Ubuntu
Software mapakeji mafomati: .deb
Desktop nharaunda: Gnome - Kubatana
Kubudirira kutenderera: Kuburitsa cyclic
Zvidimbu zveHardware: Pakati nepakati
Kurerukirwa kwekushandisa / kuisirwa: Easy
<° Kugoverwa: Kubuntu
Desktop nharaunda: KDE
<° Kugoverwa: Xubuntu
Desktop nharaunda: XFCE
Zvidimbu zveHardware: Vashoma
<° Kugoverwa: Lubuntu
Desktop nharaunda: LXDE
Zvidimbu zveHardware: Vashoma kwazvo
<° Kugoverwa: Bodhi Linux
Desktop nharaunda: Chiedza
<° Kugoverwa: Linux mint
Desktop nharaunda: Gnome
<° Kugoverwa: Elementary OS
<° Kugoverwa: Magia
Software mapakeji mafomati: .rpm
Desktop nharaunda: Gnome kana KDE
<° Kugoverwa: OpenSuse
<° Kugoverwa: PC Linux OS
Desktop nharaunda: Openbox, KDE, XFCE kana LXDE
Kubudirira kutenderera: Kutenderera kuburitswa
Kurerukirwa kwekushandisa / kuisirwa: Nyore / Yakajairwa
<° Kugoverwa: chuck
Zvidimbu zveHardware: Altos
<° Kugoverwa: Chakra
Software mapakeji mafomati: .pkg.tar.xz (mabhaisikopo akafananidzwa)
Zvemakomputa ane imwechete musimboti uye isingasviki mana maGig e RAM:
Torrent (Yakakurudzirwa): http://torrent.ubuntu.com/xubuntu/releases/oneiric/release/desktop/xubuntu-11.10-desktop-i386.iso.torrent
Torrent (Yakakurudzirwa): http://downloads.bodhilinux.com/torrents/bodhi_1.3.0.iso.torrent
Torrent (Yakakurudzirwa): ?
Zvemakomputa ane maviri kana anopfuura macores uye anopfuura mana maGig mu RAM:
Torrent (Yakakurudzirwa): http://releases.ubuntu.com/11.10/ubuntu-11.10-alternate-amd64.iso.torrent
Torrent (Yakakurudzirwa): http://torrent.ubuntu.com/kubuntu/simple/oneiric/desktop/kubuntu-11.10-desktop-amd64.iso.torrent
Dhawunirodha yakananga: http://torrent.ubuntu.com/xubuntu/releases/oneiric/release/desktop/xubuntu-11.10-desktop-amd64.iso
Torrent (Yakakurudzirwa): http://iweb.dl.sourceforge.net/project/bodhilinux/bodhi_1.3.0.iso
Torrent (Yakakurudzirwa): http://www.mandriva.com/es/downloads/download.html?product=Mandriva.2011.x86_64.1.iso&torrent=1
Dhawunirodha yakananga: http://sourceforge.net/projects/chakra/files/2011.12/chakra-2011.12-Edn-x86_64.iso
Kamwe iyo faira radzingwa "X.iso" tinogona kurekodha / kuipisa paCD / DVD (panguva yekurekodha, unofanira kusarudza kupisa disc disc;) kana kugadzira bootable pendrive.
Gadzira pendrive, USB memory, USB kiyi "Inobhururuka"
Kuti tiite izvi, tinogona kushandisa idzi mbiri sarudzo.
Yese USB Installer
Mune maonero angu, ari nyore uye akazara kwazvo.
Zvese zvinongedzo mune aya kesi.
Naizvozvi, isu takagadzirira kugamuchira iyo penguin diki.
Tisati tashinga "Zvikande musoro" uye gadza Linux ini ndichakupa mazano angu 😉
Kune mazhinji Linux inzvimbo isingazivikanwe uko patinonzwa sekuti hatibatsiri kana kutambura zvidiridze uye ugare usingakwanise kupinda facebook imwezve nguva kana kurasikirwa neruzivo rwedu, handiti? (Nah zvishoma zvekutsvinya XD) Ini ndinokurudzira chimwe chinhu, Linux ine zvakawanda zvekugovera izvo zvinogona kuyedzwa pasina kuzviisa pane yako hard drive (kana iwe ukasatevedzera rairo yekuchenjera yetafura yekuparadzira, inowanikwa pamusoro: P) , kufona LiveCD's. Izvi zvinogoverwa zvinokutendera iwe kutamba neLinux kubva pakachengeteka kwesofa rako, iwe unongofanirwa kuisa yako pendrive / USB, CD kana DVD uye batidza komputa yako (yako Bios inofanira kunge yakagadzirirwa boot kubva kuCD / DVD kana USB) kuti iwe uyedze. Iwe unenge uine anoshanda anoshanda system pane yako kifaa, iyo iwe yaunogona kuyedza chero kwaunoda !!! Wakanga usingafarire iwe here? Ingotangidza PC yako uye bvisa CD yako, DVD kana yako USB drive uye zvese zvinodzokera zvakajairwa (hapana shanduko dzaunoita muLinux dzinokanganisa izvo zviripo pane yako hard drive, kunze kwekunge wabaya kuisa Linux, saka usazvidya moyo. ;)). Zvipire kuzviyedza chero bedzi iwe uchifunga zviri nyore, maawa, mazuva, nezvimwe. Izvi ndezvekuti iwe utange kucherechedza nzvimbo yacho uye kujairana nayo. Tarisa kuti yako ese Hardware yave kuzivikanwa uye inogona kushandiswa zvakajairika. Edza iwo maapplication ayo anouya neasipo senge webhu mabhurawuza, tsamba dzevatengi, nezvimwe. Edza kuisa zvishandiso zvitsva kana kusunungura izvo zvaunofunga kuti hazvina basa. Ukangonzwa kugadzirira kana kugadzikana unogona kuiisa pakombuta yako;).
Kana iwe uchinyatso kunzwa kuti iko kushanduka kwakanyanya kusiya Windows kumashure kuti uise chete Linux pakombuta yako, unogona kuva ne Dual Boot. Dual Boot ndeyekuti uve nemaviri anoshanda masystem pakombuta yako, uchisarudza paunobatidza PC neiyo OS yaunoda kutanga (muchokwadi unogona kuva nezvakawanda, asi inogona kunge iri imwe nyaya yepamberi iwe).
Zvakanaka shamwari uku ndiko kutanga, kuchine zvimwe zvishoma zvasara kuti ugone kunyatsoita zvimwe "vhezheni" Linux pakombuta yako. Mune inotevera kutumira ini ndichaedza kukutungamira panguva yekumisikidza kwayo (kwete kuita izvi zvakare: 3). Kusvikira nguva inotevera 😉
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Yakurudzirwa » Ungada here kuedza Linux? Tungamira yevanoda kuziva uye vatsva.
Yakanaka post, makorokoto!
Kune mazhinji Linux inzvimbo isingazivikanwe uko patinonzwa sekuti hatibatsiri kana kunetseka kuidiridza
Juajuajua ndiwo manzwiro andakaita pandakatanga kupinda munyika ino uye ndakaidiridza kanopfuura kamwe uye nanhasi handizviite hahahaha
Anoshamisa posvo, makorokoto.
Yakanaka kwazvo posvo, yakakwana kwazvo uye iine ruzivo runoshanda. Ndatenda zvikuru sekugara;)
+1000 Yakanaka Perseus ^ ^
Zvakanaka chaizvo 🙂
Kugamuchirwa kuchikwata shamwari ... zvinofadza chaizvo kupedzisira wave newe pano
Kwazisai uye tinovimba kuenderera mberi nekukuverengera iwe 😉
Akanakisa kwazvo gwara uye akazara kwazvo uye akanyatsotsanangurwa. Ini ndaingogadzirisa zviperengo zvikanganiso 😉
Chinhu chakanaka ndechekuti ndakaita nhanho yekuiongorora XD, Ndatenda nekucherechedza.
Ehezve, nekuda kwekushayikwa kweruzivo uye neruzivo ruzivo, hazvisi izvo kuti ini ndichapa nzira kune linux. Ndinoifarira, hongu changamire, zvakanyanya.
Kutenda kuzhinji kuna @zvose : D !!!! (kunyanya kusave wakarara | -))… XD
Ndinokutendai (@ichit uye @KZKG ^ Gaara) yekundikoka kuti ndive chikamu chenharaunda huru iyi uye nditendere kuti ndinyore nezvayo. Pasina kuzviziva, vakaumba mhuri huru : - #. Ndiri kufara kwazvo nezvese izvi… TT
Ehe, isu ticharamba tichinyora nekuverenga kazhinji kwazvo. Zvese zvinhu zvekugovana, kudzidza uye kukura sevanhu.
Kwaziso ... 😉
Makorokoto, hapana mumwe ari nani kupfuura mumwe munhu anoshandisa opera kuve munharaunda ino 🙂
Ini ndinoramba ndichiidiridza nhasi uye pese pandinoidiridza nenzira inoshamisa, asi usazvidya moyo, vashoma vanhu vakaita semakamikaze seni ndiri xD
Yakanaka chinyorwa chako, ini ndaifarira: D. To favorites !!
sisas ipositi yakanaka asi @Perseo anogadzirisa mamwe madiki matambudziko uko gumi: Kune makomputa ane imwechete musimboti uye isingasvike 1 Megas mu RAM uye Kune makomputa ane maviri kana anopfuura macores uye anopfuura mana Megas mu RAM ari maGigs e RAM.
uye kune imwe kana chimwe chinongedzo chakashata: icho che Yese USB Installer.
Izvo zvakanaka kuti iwe uzvigadzirise, ini ndoziva kuti iyo posvo yakakura kwazvo uye currado uye ndosaka isina rusununguko rwekukanganisa.
Zvikanganiso zvakagadziriswa, ndatenda neruzivo. 😉
Oooooooooorale! Ndinoda kuti beacon ripindirwe ipapo rinondibvumidza kuisa yakashama muromo chiratidzo nekuti ndiri Akafadzwa!
Chokwadi ndechekuti gwaro iri rinofanirwa kuve nechikamu chakakosha.
Felicidades naPerseus uye ndinotenda chiuru nekuzvipira kwakanyanya.
Yup hehe ... tsika dzemasikoni ibasa rakamirira ratiri, Alba akambotaura muforamu kuti pamwe angatipe ruoko HAHAHA.
Uye unobvumirana zvachose ... chinyorwa chakanakisa, chaizvo ... chakaratidza ... chakapinda mubhurogu kuburikidza nemusuwo wepamberi (sezvavanotaura pano) LOL !!!
Ndatenda shamwari, gare gare handisi kuzozvitenda kana ini pachangu. XD
Kuti @Perseo anofanira kunge akapedza zuva rese achinyora uye achizviita.
Iyo yakanaka gwara haha ​​@Perseo kuti unoifarira sei ... izvozvi iwe unofanirwa kugadzira gwara kune yega yega distros yawakaisa ipapo. uye saka iwe unoitwa iye anotyaira tenzi kana ukadaro.
Hahahaha, nenguva yandinopedza neaya magwara, Ubuntu 12.10 uye Linux Mint 14 XD ichave iri kunze
Rakanaka kwazvo gwara, dai raive taringa raizove reposvo repamusoro.
Kana uchida, unogona kuiisa muTaringa pasi peakaundi yako, uchigara uchiisa chinongedzo kuchinyorwa chekutanga uye uchitaura Perseo semunyori 😀
Makuru! ... Makorokoto Perseus, inonakidza gwara, imwe yeakanakisa andakaverenga kutanga munyika ino. Ngatione kuti vangani vashandisi vatsva vanokurudzirwa kushandisa Linux nekutangisa kwakadai seichi - zvirokwazvo vamwe vanozoraura ... xD -.
Zvakare, makorokoto ...
Imwe zvekare? Haha isu tatova zai revapepeti, tinogona kutyora kumeso kweavo vanoda kutarisana nesu nezvose zvatiri.
Chinyorwa chinonakidza chevanhu vanotanga, zvakare chakazara kwazvo
HAHAHAHA ehe, zvakaisvonaka ndatozvitaura ... hehe, uri kunetseka here chivindi? ... vachatungamira munguva pfupi HAHAHA, uye ini ndatozvitaura ... isu tichapa mubairo (mune ramangwana, ikozvino hatigone haha) vanyori vakanyanya 😉
Ini ndanga ndato kukuudza zvandaifunga nezve mubairo ne chat, uye iwe wakandiudza nezve EMO, rangarira murume mukuru
mmm kwete handirangariri LOL !!! yup ... ndizvozvo zera ... HAHAHAHA
Ini ndichatsvaga iyo chat ndobva ndatumira kwauri neposvo, kupfuura chero chinhu kuitira kuti usamhanyisa vamwe nekuburitsa zvinhu panhau.
Thanks diki troll 😉
Magnificent chinyorwa, kwausina kukanganwa chero chinhu chakakodzera.
Ino inguva yekutanga kuona ini gwara rakazara seichi, ndizvo zvese zvandaida kuziva nezve linux ndisati ndatanga.
Pindura kuna hairosv
Thanks @Ozcar na @hairosv, saka tasangana nechinangwa 😀
Perseus, gamuchirai kune iyo blog (sezvo ini ndakuverengera muforum) uye makorokoto pane iyo posvo. Panguva ino ini handisi kuzokutenda, asi ndine chokwadi kuti munguva pfupi ndicha, nekuti ndiri kuedza kugombedzera shamwari kuti ichinje kuLinux kamwechete uye ndine chokwadi chekuti iyi posvo inozomugonesa pazvinhu zvese!
Tremendous post !!!!
Makorokoto angu 😉
basa rakanaka… Kwaziwai uye ndinofara gore idzva.
Goredzva Rakanaka munhu wese 😉 Maita basa nekutaura kwenyu…
Lucas Matthias akadaro
Yakanaka kwazvo yakapusa uye yakanyatsogadziriswa Perseus gwara, sezvawataura kuitira kuti usavhiringidze; D
Pindura kuna Lucas Matias
Iva nenguva yakanaka pamapati aya 😀
William kuenderana kwekuedzwa pamwe nemamwe mazita okutanga akadaro
Yakanaka kwazvo posvo, inonakidza kwazvo uye yakakwana.
Kunaka kune chirevo chekuti muGNU / Linux kune akati wandei maDesktop enzvimbo ekushandisa, chimwe chinhu icho mune mamwe masisitimu anoshanda hachina kana kumbofungidzirwa nezvacho.
gara nhanho imwe kumberi ndizvo zvandaitsvaga, ndatenda.
Ndo zvatakavinga, shamwari;), zvinofadza kuva newe pano.
Chinyorwa chakanaka, asi maererano http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernelLinux inyanzvi musimboti weiyo Unix-senge anoshanda masystem.
Yakanaka post, ino inguva yekutanga kuverenga chero chinhu nezveLinux uye ini ndakaiwana yakanaka. Chandinonyanya kufarira ndechekuti mahara, ndaneta nekushandisa mazana emauro pa software.Ndichazviedza uye ndichave nekutenda, kana gare gare ndikadzidza chimwe chinhu uye ndichikubatsira, ndicha.
Ndatenda uye gamuchirai kune ino saiti 😀
Kune zvimwe zvikamu zvegwara rino, ndiko kuti, kuenderera mberi uko kunotsanangurwa nezve mafomu, desktop desktop, nezvimwe, ndinokurudzira kuti uverenge 😉
Kwaziso uye iwe unoziva ... isu tiri pano kuzobatsira help
Ndatenda kwazvo negwara iri, ini ndangoisa xubuntu, uye ndinonzwa kuti zvinoshanda zvinoshamisa kwandiri, chaizvo, dai chisiri chako mupiro, ndingadai ndisina kukurudzirwa uye ndine chikwereti kwauri, ndinovimba kuziva zvakawanda pamusoro pezvinyorwa zvako.
Kutenda neruzivo, unganidza rumwe ruzivo painternet asi izvi zvakajeka uye zvakarongeka.
Mukuru, ndinokutendai zvikuru netsananguro yenyu. 🙂
Pindura kune cc3pp
Wakaturika, yakanakisa post. Dai iwe wanga uri Messi pakona.
Ndatenda kwazvo neruzivo
Pindura kuna cesar316
Iyo Shimmer Project: Akanaka madingindira eXfce
Vanotyairi veApple vanoverengerwa muLinux 3.3 kernel